साम्राज्ञी र पुष्पको कस्तो प्रेम ? ‘सक्दिनँ म बाँच्न’ (भिडियो) « Mazzako Online
साम्राज्ञी र पुष्पको कस्तो प्रेम ? ‘सक्दिनँ म बाँच्न’ (भिडियो)
नवल नेपाल निर्देशित फिल्म ‘मारुनी’ मा समाबेश दोस्रो ‘सक्दिनँ म बाँच्न’ बोलको गीत रिलिज भएको छ । केहि समय अघि सार्वजनिक गरिएको ‘जाम्न माया जाम’ बोलको गीतले मज्जाको प्रतिक्रिया पाइरहेको अबस्थामा निर्माण टिमले रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्जुन पोखरेलको संगीत र वाग्लेको शब्द रहेको गीतलाई गायिका मेलिना राईको स्वर दिएकी हुन् । भाद्र १३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्मले त्रिकोणात्मक प्रेमकथा बोल्ने बताइएको छ । सार्वजनिक गीतमा फिल्मका लिड अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह प्रस्तुत छन् ।
पुनम गौतमले निर्माण गरेको फिल्ममा सह–निर्मातामा राजा प्रधान, दर्शन केसी र मिना क्षेत्री छन् । गोविन्द फुँँयाल र निर्देशक नेपालले फिल्मको कथा लेखेका हुन् । फिल्मलाई संजय लामाले खिचेका हुन् । फिल्ममा नायिका रेविका गुरुङको पनि मुख्य भूमिका छ । फिल्ममा शुशील क्षेत्री, अर्जुन श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, शंखर सेढाइलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहेको छ । मित्र डि.गुरुङ फिल्मका सम्पादक हुन् ।